LUNGISA I-HOTSPOT YEFOWUNI ENGASEBENZIYO WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Lungisa i-hotspot yefowuni engasebenziyo Windows 10
Lungisa i-hotspot eyiSelfowuni ayisebenzi: I-Intanethi iye yaba yimfuneko kuthi sonke. Ke ngoko, sihlala siqinisekisa ukuba izixhobo zethu zixhunyiwe kwi-intanethi. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, kufuneka sabelane nge-intanethi kunye nezinye izixhobo ezingenayo i-intanethi esebenzayo. Indawo ephathekayo Itekhnoloji esenza ukuba sabelane ngoqhagamshelo lwethu olusebenzayo lwe-intanethi ngesixhobo esinye nezinye izixhobo. Ngaba akupholanga ukuba ungadibanisa ezinye izixhobo ngaphandle kweintanethi ngesixhobo esinye esinonxibelelwano olusebenzayo? Ewe, eli nqaku Windows 10 Inkqubo yokusebenza ngokuqinisekileyo lulongezo olukhulu. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha abasebenzisi bafumana i-hotspot ephathekayo engasebenzi kwizixhobo zabo. Apha kweli nqaku, siza kuhamba ngezona zisombululo zisetyenziswayo kule ngxaki.
Indlela ye-1-Phumla useto lweWindows kwiWindows
Indlela yesi-2-Setha kwakhona iiadaptha ezingenazingcingo
Indlela ye-3-Sebenzisa i-Windows Troubleshooter
Indlela ye-4-Nika amandla Ukwabelana ngoNxibelelwano lwe-Intanethi
Indlela yesi-5-Cima okwethutyana i-Firewall kunye ne-Antivirus Software
Indlela ye-6-Cima iBluetooth
Inkqubo yokhuseleko yeWindows ikhusela nakweyiphi na malware kunye neenkqubo ezikrokrisayo kwinethiwekhi. Ke ngoko, inokuba sesinye sezizathu zeendawo ezihlala zikhona ezingasebenziyo ezingasebenziyo. Singaseta kwakhona useto lweWindows kwi-firewall ukukhangela ukuba iyayilungisa na ingxaki.
1 vula Useto . Chwetheza useto kwibar yokukhangela yeWindows kwaye ucofe kwisiphumo sokukhangela ukuze uyivule.
2 Ngoku khetha Uhlaziyo kunye noKhuseleko ukusuka kuseto lweWindows.
3.Kwiphaneli yasekhohlo, kufuneka ucofe kuyo Windows Defender.
Ukufikelela kuseto lwe-firewall, kuya kufuneka ucofe ku Vula iZiko loKhuseleko lweWindows .
5.Here kufuneka ucofe ifayile I icon yomnatha kwicala lasekhohlo uze uskrolele ezantsi ukukhetha Buyisela izixhobo zokucima umlilo ngokungagqibekanga.
Indawo yokudibanisa ayinangqwalaselo eyiyo ye-ip
6. Qiniseka nje ukuba uyafuna seta useto kwakhona xa iiWindows zisenza.
Ngoku qala inkqubo yakho kwaye ujonge ukuba ingxaki ye-hotspot yeselfowuni isonjululwe na okanye hayi.
Ukuba isisombululo esichazwe apha ngasentla khange sisebenze, awudingi ukuba nexhala kuba siza kukunceda kwezinye izisombululo. Kuyenzeka ngamanye amaxesha ukuba ngohlaziyo lwamva nje lweWindows, ezinye izinto zoqwalaselo lweadaptha kufuneka zisethwe ngokutsha okanye zihlaziywe. Siza kuzama ukuseta iiadaptha kuqala kwaye ukuba ayisebenzi, siya kuzama ukuvuselela umqhubi kunye nokujonga ukuba ingxaki isonjululwe na.
Cofa iqhosha leWindows + R kunye nohlobo yitshise.msc kwaye ucofe ukungena ukuvula uMphathi weDivayisi.
2.Here kufuneka ucofe kabini Iiadaptha zenethiwekhi icandelo ukuyandisa. Ngoku, ikopi elungileyo k kwi Iadapter engenazingcingo yeWindows kwaye ukhethe Khubaza isixhobo .
3.Qiniseka ukuba Iadaptha engenazingcingo ikhubaziwe.
4. Ngoku cofa ekunene kwiWindows Wireless Adapter kwaye ukhethe Yenza isebenze . Lindela imizuzwana embalwa ukufumana isixhobo kwakhona.
Ngoku jonga ukuba ingxaki yeHotspot ephathekayo isonjululwe.
Phawula: Unokukhetha ukhetho lokuhlaziya umqhubi. Landela nje inyathelo 1 kunye 2 kodwa endaweni yokukhetha ukukhubaza isixhobo, kuya kufuneka ukhethe Hlaziya ukhetho lomqhubi . Le yenye indlela yokusombulula ingxaki yakho ephathekayo. Ukuba iiWindows ziyasilela ukuhlaziya umqhubi ngokuzenzekelayo unokukhuphela umqhubi kwiwebhusayithi yomenzi kwaye uyihlaziye ngesandla.
eyona windows 10 isixhobo sokusetha kwakhona iphasiwedi
Indlela ye-3-Sebenzisa iWindows Troubleshooter
Enye yezona zinto zinomdla kwaye ziluncedo ngaphakathi Windows 10 yingxaki yokuSombulula ingxaki. IWindows ikunika ukusombulula ingxaki kuyo yonke imiba ohlangabezana nayo kwinkqubo yakho.
1 Uhlobo Ingxaki kwibha yokukhangela yeWindows kunye noseto oluvulekileyo lokusombulula ingxaki.
2.Skrolela ezantsi ukukhetha Iadaptha yenethiwekhi kwaye ucofe ku Qalisa isisombululo.
3. Ngoku iWindows iya kujonga ukuba zonke iisetingi kunye nabaqhubi beadaptha nenethiwekhi basebenza ngokufanelekileyo okanye hayi.
4. Nje ukuba inkqubo igqityiwe, kuya kufuneka uqale ngokutsha inkqubo yakho kwaye ujonge ukuba uyakwazi lungisa i-hotspot yefowuni engasebenziyo Windows 10 ukukhutshwa.
Ukuba uzama ukusebenzisa uqhagamshelo lwakho lwe-Ethernet kwi-hotspot, unokuzama ukwenza kwakhona ukwabiwa kwezicwangciso zonxibelelwano ze-intanethi.
2.Khetha ifayile ye- Unxibelelwano lwenethiwekhi tab kwaye ucofe kuyo I-Ethernet kwithebhu yonxibelelwano yangoku.
3.Cofa kwi Iipropati icandelo.
4. Zulazula uye kwi Ukwabelana ngethebhu kwaye sukukhetha zombini iindlela onokukhetha kuzo.
5. Ngoku ujonge kuseto olufanayo kunye jonga zombini iindlela onokukhetha kuzo ukwenza kwakhona useto.
Nje ukuba ugcine izicwangciso, unokujonga ukuba ingxaki isonjululwe na okanye hayi.
Indlela yesi-5-T ngamandla Cima iFirewall kunye neAntivirus Software
Ngamanye amaxesha useto lwe-firewall kunye nesoftware ye-antivirus iyakuthintela ekuxhumaneni neseto sakho sendawo ekuhamba kuyo. Ke ngoko, unokuzama le ndlela kwaye ujonge ukuba ingxaki isonjululwe na okanye hayi.
google chrome cotha windows 10 2018
Phawula: Khetha elona xabiso lincinci lexesha elinokwenzeka umzekelo imizuzu eli-15 okanye imizuzu engama-30.
Xa usenzile, zama kwakhona ukufikelela kwi-hotspot eyiSelfowuni kwaye ujonge ukuba impazamo iyasombulula okanye hayi.
Cinezela i-Windows Key + S emva koko uchwetheze ulawulo kwaye ucofe ku Iphaneli yokulawula kwisiphumo sokukhangela.
chromecast ayisebenzi kwiLaptop
Kwakhona zama ukufikelela kwiHotspot eyiSelfowuni kwaye ubone ukuba uyakwazi na Lungisa i-hotspot yefowuni engasebenziyo Windows 10. Ukuba le ndlela ingentla ayisebenzi qiniseka ukulandela amanyathelo afanayo ukuvula iFirewall yakho kwakhona.
Le ndlela inokusetyenziselwa ukusombulula ingxaki yakho njengoko abasebenzisi abaninzi befumanisa ukuba iluncedo. Ngamanye amaxesha ukwenza iBluetooth kunokubangela ingxaki. Ke ngoko, ukuba uyayicima, inokusombulula ingxaki. Jonga ku Useto> Izixhobo> iBluetooth emva koko uyicime.
Ndiyathemba ukuba ezi ndlela zichazwe apha ngasentla ziya kukunceda Lungisa i-hotspot yefowuni engasebenziyo Windows 10 . Kuya kuba kuhle ukuba uqala ukumisela iingxaki ezibangela le mpazamo kwinkqubo yakho ukuze usebenzise esona sisombululo sisebenzayo. Kwakhona, ukuba unemibuzo malunga nesi sifundo emva koko uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
impazamo ebalulekileyo windows 10 lungisa
I-google chrome ayidlali iaudiyo
asikwazanga ukwenza impazamo yokwahlulahlula
phumelela iqhosha lokuqalisa eli-10 lingasebenzi
Awunakho ukungena kwi-iTunes windows 10
iiwindows 10 task view ayisebenzi